मंगलबार तपाईंका लागि वैभवपूर्ण दिन हुनसक्छ – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Religious/मंगलबार तपाईंका लागि वैभवपूर्ण दिन हुनसक्छ
धन तथा बैभवको हिसावमा मंगलबार शुभ मानिन्छ । मंगलबार व्रत बसेर पूजा आराधाना गर्दा धन सम्पन्न हुन्छ भन्ने मान्यता छ । त्यसो भए धन प्राप्तीका लागि मंगलबार के गर्ने त ?
जीवन भोगाइका समस्या कम गर्न पनि मंगलबार हनुमान मन्दिरमा गएर रामरक्षा स्त्रोत पाठ गर्दा राम्रो हुने विश्वास गरिन्छ ।मंगलबारको दिन एउटा धागोको बीचमा कागती राखेर एकातर्फ ४ वटा खुर्सानी र अर्को तर्फ ३ ओटा खुर्सानी राखेर व्यवसायिक स्थलमा राख्दा व्यवसाय फस्टाउने र व्यवसाय नाफामा जाने विश्वास गरिन्छ ।
हनुमानलाई सिन्दुर अर्पण गर्दा सबै कष्ट नास !!यस्तो छ धार्मिक बिश्वास !!
पुजा गर्दा कहिलै नगर्नुहोस् यी गल्ती !! पुरा पढी शेयर गर्नुहोला !!